သင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အကောင်းဆုံးအော်ဒီယို - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
တစ်ခါတစ်ရံ ပြီးပြည့်စုံသောစကားလုံးများကသင့်အားခက်ခဲသောအခြေအနေမှလွတ်မြောက်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏ ဦး ခေါင်း၌တစ်ခုခုရှိလျှင်သင်ထွက်မသွားနိုင်သည့်သံသရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပေါက်ရှာရန်မတတ်နိုင်ပါ၊ သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုငြိမ်သက်စေရန်သင်၏စကားလုံးများကမလုံလောက်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သင့်အားကူညီရန်၊ ဘဝအခက်အခဲများကိုသင်ရင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းရန်သင့်အားပြ,နာကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာရန်လမ်းညွှန်ချက်များကိုသင့်အားအကူအညီပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကသင်၌ရှာတွေ့အားလုံးပါပဲ ဤအပိုင်းတွင်သင်တွေ့ရမည့် Self-help audios။ ယနေ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံး၌အလင်းကိုမြင်နိုင်ရန်ကူညီပေးသောထိုစကားလုံးများကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ စာအုပ်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စကားစုများသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များကဲ့သို့ပင်အော်ဒီယိုများကိုကျွမ်းကျင်သူများက ဖန်တီး၍ လူများကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံရှာဖွေရန်ကူညီသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာတခြားသူတွေကြားမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ခုချင်းစီရဲ့အားသာချက်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။
သို့မှသာသင်သည်မိမိကိုယ်ကိုအပြည့်အဝပျော်ရွှင်ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ရှာဖွေနေတာကသင်မနှစ်သက်သောသင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ အခြားလူများနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်အခက်အခဲများသို့မဟုတ် သင့်ကိုအားတက်စေသောတန်ဖိုးများကိုသင့်ကိုယ်သင်ရှာဖွေနိုင်စွမ်း အခြားလူများရှေ့မှာ။ ဒါတွေအားလုံးကိုသင်လေ့လာပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အကြောင်းမှာလူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေသည့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသော်လည်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်ဘဝနှင့်အတွေ့အကြုံများတစ်လျှောက်တွင်အတုပြုလုပ်ထားသည်။
ဘဝဟာခရီးသွားခြင်းနဲ့တူတယ်တစ်ခါတစ်ရံထိုအတွေ့အကြုံများသည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီနိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်မကျော်လွှားနိုင်သောကျောက်တုံးဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကလေးငယ်သည်လမ်းလျှောက်ရန်၊ စားရန်၊ ပြောဆိုရန်သင်ယူရန်လိုသကဲ့သို့၊ ဘ ၀ ကိုလည်း၎င်းကိုအသက်ရှင်ရန်သင်ယူရမည်။ အခိုက်အတန့်မှအတွေ့အကြုံတစ်ခုစီမှလေ့လာခြင်း၊ အခြေအနေတစ်ခုစီတွင်အပြုသဘောကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောချိန်ခွင်လျှာကိုခံစားနိုင်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဟန်ချက်ညီစွာနေထိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အဖြစ်သိပ်အဆင်သင့်မဟုတ်ထံမှဘဝသင်ယူမှုရယူအဖြစ်။
သို့သော် Self- အကူအညီဖြင့်အော်ဒီယိုများတွင်ကမ်းလှမ်းမှုသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည် အချိန်တိုင်းသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောအရာကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်၊ ဒီ Audios အခန်းမှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်အကြောင်းအရာများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်တယ်၊ သို့မှသာသင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အသံကိုသင်ရရှိနိုင်တယ်။
သင့်အနေဖြင့်အပြုသဘောဆောင်စွာဖော်ပြရန်အတွက်သိသောလူမှသင့်လျော်သောအချိန်၊ သင့်လျော်သောစကားလုံးများကိုသင်ကြားရန်သာလိုကောင်းလိုပေမည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်အောင်မြင်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ဟောပြောပွဲရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည် အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏သော့များပညာရှိစကားများကသင့်အားပျော်ရွှင်မှုမဖြစ်စေသောအရာများကိုဖြေရှင်းရန်မလိုအပ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိစေနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကသူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုမပေးတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အချို့လူများကမူမိမိတို့လက်၌အောင်မြင်မှုရရန်သော့ရှိသည်ကိုသတိပြုမိကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကိရိယာများလိုအပ်ပြီး၎င်းတို့လုပ်နိုင်သမျှကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤအခန်းတွင်သင်တွေ့ရမည့်အော်ဒီယိုများကိုရှာဖွေပါလူနေမှုပုံစံစတဲ့၊ အပြည့်အဝပျော်ရွှင်သောဘဝတွင်နေထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ၊ အလုပ်အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအကောင်းဆုံးသောလမ်းကြောင်းအကြောင်းလေ့လာပါ။ သင်လိုအပ်သည်ကိုသာသင်သိသည်။ ပျော်ရွှင်မှုလမ်းကြောင်းကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ရန်အတွက်သင်၏လက်ထဲတွင်စတူဒီယိုများ၊ ကွန်ဖရင့်များ၊ အော်ဒီယိုစာအုပ်များနှင့်အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ထားသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သံသယ ၀ င်သူတွေထင်နိုင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး စာအုပ်များ၊ စတူဒီယိုများသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောမိမိကိုယ်ကိုကူညီနိုင်သောအရင်းအမြစ်များသည်အားနည်းသူများအတွက်မဟုတ်ပါသို့သော်အခြားသူများထံမှမည်သို့သင်ယူရမည်ကိုသိသောသူတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
၁၉ ကိုယ်ပိုင် Self-Help Audios (ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်)
ဒီသင်ခန်းစာ ၁၉ လုံးကိုအခမဲ့အခမဲ့အော်ဒီယိုကိုငါပြမယ်။ ၎င်းတို့တွင်ဟောပြောချက်များနှင့်လူ့အသံဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုယ်တိုင်ကူညီသည့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များပါဝင်သည်။
ဝိန်းဒိုင်ယာ၏ "သင်၏ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၁၀၁" Audiobook
ဝိန်းဒိုင်ယာမှသင့်ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ၁၀၁ လမ်းအမည်ဖြင့်ထုတ်ထားသောသေးငယ်သောအော်ဒီယိုစာအုပ်ငယ်။ မှသာနားထောင်ရန်အလွန်အလင်း ...
Paulo Coelho မှ« Alchemist »အော်ဒီယိုစာအုပ်ကို
Paulo Coelho မှ“ Alchemist” စာအုပ်၏အသံကိုလူ့အသံဖြင့်စက်ရုပ်မဟုတ်ပါ။ ငါခွဲထားတယ် ...
ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ဟာကလေးဘဝကိုမှတ်သားထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ audiobook ကိုလူအများစုရဲ့ယူဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းဖြစ်သည်…
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့9အနှစ် .
ငါ Raimon Samsóကိုဒီနေ့အထိငါမသိခဲ့ဘူး၊ သူနဲ့သူအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တယ်။ ပုံရသည် ...
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့ 11 အနှစ် .
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖန်တီးခဲ့သောကိုယ်ပိုင်အထောက်အကူပြုစာအုပ်များစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်ထိုက်သောမည်သည့်အော်ဒီယိုစာအုပ်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာကြာပြီဖြစ်သည်။
Deepak Chopra မှ« The Magician of the Path »အော်ဒီယိုစာအုပ်
ဒီအော်ဒီယိုစာအုပ်နှင့်အတူ· Deepak Chopra မှ« the the magician of path »သင့်စွမ်းရည်ရှိသောသင်၏အတွင်းစိတ် magician ကိုရှာဖွေရန်သင်ယူလိမ့်မည်။
Og Mandino မှ "ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးရောင်းသူ" နှင့်အတူမိမိကိုယ်ပိုင်ကူညီသည့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များစာရင်းထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ထည့်သွင်းသည်။
လူးဝစ် Huete မှ«သင်၏အိပ်မက်ကိုတည်ဆောက်ပါ» Audiolibro
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့မင်းကအသံ ၄၉ မိနစ်ကျော်ခံတယ်။ လူးဝစ္စရေးသားတဲ့စာအုပ်ပါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုဒီ Self- အကူအညီနဲ့၏ဂန္အတူထားခဲ့ပါ။ ငါကနားထောင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည့်အခါမနေ့ကသည်အထိဖတ်ဘူး။
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့ 12 အနှစ် .
ဒီနေ့ငါ့ရဲ့ပထမဆုံး Podcast ကိုဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နေ့စဉ် ၅ ကြိမ်ခန့် Podcast တခုကိုလုပ်ဖို့ငါကြိုးစားမယ်။